Fifidianana Ben’ny Tanàna Tao Arabia Saodita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2017 12:27 GMT
Rehefa nanao fanambaràna i Arabia Saodita fa hotanterahana ny taona 2004 ny fifidianana ben'ny Tanàna, dia efa nieritreritra mialoha izao tontolo izao ny amin'izay mety hitranga amin'ny fifidianana voalohany ao amin'ity fanjakana mpitàna ny fomban-drazana ity. Mpanaramaso sasantsasany, hatramin-dry zareo Saodiana, no diso fanantenana fa hoe ny antsasak'ireo mpikambana ao anatin'ilay filankevitra vaovao no ho apetraky ny governemanta, kanefa, nieritreritra ny ankamaroan'ireo Saodiana fa efa dingana voalohany tsara mankany amin'ny demokrasia sy ny fanovàna izy io. Voahilika tamin'ilay fifidianana ireo vehivavy noho ny antony antsoin'ireo mpikarakara hoe: olana ara-pandaminana. Tsy nanaiky izany ny vahoaka, kanefa namaly ireo mpikarakara fa efa manaraka ny fepotoana farany nomen'ny governemanta izy ireo ka tsy hahatratra izany fepotoana farany izany raha tsy maintsy hampiditra ireo vehivavy. Nanambara ihany koa izy ireo fa mandray anjara ny vehivavy amin'ny fifidianana manaraka ny taona 2009. Ato misy sary tselatra tamin'ny fifidianana sy ireo fotoana nahaliana nandritr'izany.
Nanintona kokoa ny fihodinana faharoa natao tany amin'ny faritra atsinanana sy andrefan'ny firenana noho ireo lesona voaray tamin'ny fihodinana voalohany, no sady koa noho ireo faritra roa ireo, indrindra fa ny atsinanana, tena mahamaro an'isa azy ireo, misy Shiita vitsy an'isa. Ireo Shiites, izay noavakavahana nandritry ny tantaran'ity fanjakana ity, nefa te-hanana anjara amin'ny fifidianana mba hanaporofoany ny fisian'izy ireo, ary mba handraisany anjara amin'ny dingan'ny fanapahankevitra. Nandrindra ny ezaka nataony izy ireo ary tena nipetrapetraka tsara izany. Nanjakan'ny kandidà Shiita tanteraka ny fifidianana tany amin'ireo tanàndehibe tao Hassa (aka Al-Ahssa) sy Qateef, ka nahazoany toerana 11 amin'ny 12. Kanefa na Shiita avokoa aza ny ankamaroan'ny vahoaka ao Dammam, renivohitry ny faritra atsinanana, dia tsy nisy Shiita nahazo fandresena tany. Eny fa na i Ehsan Bu-Hlaiga aza, ilay mpanefoefo malaza sy mpikambana teo aloha tao amin'ny Filankevitra Shoura. Ny antony hoy ireo mpanara-baovao dia satria, tsy toy ny zava-nisy tany amin'ireo faritra hafa, nivondrona fatratra ireo Sionita mba tsy hisorohana izany. Nisy tsaho nandeha momba ny lisitra notohanan'ireo manampahaizana ara-pinoana, kanefa toa tsy nisy fiantraikany tamin'ny fifidianana akory izany toy izay nitranga farany tany Jeddah.
Satria aho avy any Hassa, dia nandray anjara tamin'io fihodinana tamin'ny fifidianana io aho, reharehako ny nahatafiditra ahy tao anatin'ity vanim-potoana manan-tantara ity. Nadio ny dingana momba ny fisoratana anarana sy ny fifidianana, mora ary haigana (latsaky ny dimy minitra no nanaovako azy roa ireo). Neniko fotsiny ny tsy nahafahako nanatrika ny ankamaroan'ireo fampielezankevitra. Na izany aza, namaky betsaka aho, ary niresaka taminà olona maro mba handraisako fanapahankevitra. Tanora toa ahy, 21-24 taona, ny maro an'isa tamin'ireo mpifidy araka ny salanisa navoakan'ny MOMRA. Kanefa, tsy ny lehilahy tanora rehetra no nanana hafanampo nitovy momba ny fifidianana. “Fifidianana inona? Aok'izao fa misaotra, tsy amin'izany aho,” no fomba fiteny heno tetsy sy teroa nandritry ny fotoana fisoratana anarana.
Ny fihodinana farany, izay vao nifarana tsy ela akory, dia natao tany amin'ireo faritra andrefana sy avaratra. Feno fifanoheran-kevitra ireo fifidianana tao an-tanàndehiben'i Jeddah, satria nanjaka tamin'ny fifidianana ireo mpikambana fito ao amin'ilay antsoina hoe “Golden List” (lisitra volamena). Ny “Golden List,” no misy ireo kandidà Silamo, natosik'ireo mpitondra fivavahana, ary nalefa tamin'ny SMS sy ny vovonana tamin'ny aterineto. Nitaraina ireo kandidà tsy lany, tamin'ny filazàna fa tsy azo ekena ary tsy ara-dalàna ny fomba nitaonan'ireo mpitondra fivavahana tamin'ny fifidianana. “Mila mampaniry volombava aho handreseko amin'ny fifidianana manaraka” hoy ny kandidà iray tsy lany raha niresaka tamin'ny Associated Press.